प्रमाणपत्र सोकेसमा सजाउने शिक्षाको के अर्थ ? – YesKathmandu.com
शनिबार २२, साउन २०७३
उच्च शिक्षा लिन बर्षेनी सयौ बिद्यार्थी भारतदेखि अमेरिकासम्मका दर्जनौ देशमा पुग्ने गर्दछन् । नेपालमा लिएको शिक्षाले अन्तराष्टिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरुकै ठुलो स्वर छ । तर नेपालमै अन्तराष्टिय शिक्षा लिएर अन्तराष्टिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने दावी पनि अहिले त्यति नै गतिलो रुपमा आउन थालेको छ ।
जीवनमा जस्ता सुकै कठिन मोडहरु आएपनि संर्घष गर्न र कोसिस गर्न कहिलै नछोडने, आत्मबल र आत्मविश्वाश बनाउन सक्ने नै सार्थक शिक्षा हो । त्यो शिक्षा नेपालमा प्राप्त गर्ने सकिने दावी यी सक्षम ब्यक्तिहरुको छ ।
उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जान आवश्यक छैन
कल्याण अधिकारी (जनरल म्यानेजर डिस होम)
शिक्षा भनेको सर्टिफिकेट लिने कुरा मात्र हैन । जीवन ब्यवहारमा लागु गर्न सकिने हुनु पर्दछ । कुनै नाम चलेको ठुलो कलेजबाट सर्टिफिकेट लिँदैमा उसको जीवन ब्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि होइन । नेपालका धेरै कलेजहरु अहिले जीवन उपभोगि बन्दै गएका छन् । यहीँका कलेजबाट शिक्षा लिएका धेरै ब्यक्ति अहिले विदेशको महत्वपूर्ण ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ की नेपालको शिक्षा कमजोर छैन ।
मैले भर्खरै प्रिसिडेन्डल कलेजबाट एमविए सकेँ । प्रिसिडेन्टलको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो अमेरिकाबाट लिने शिक्षा नेपालमै लिन सकिन्छ । अमेरिकी डिग्री नेपालमै दिइरहेको छ । यस कलेजमा पढाउने फ्रोफेसहरु पनि निकै अनुभवी र दक्ष हुनुहुन्छ । अधिकाँस प्रोफेसरहरु त्रिभुवन विश्वबिद्यालयबाट आउनु भएको छ ।
प्रिसिडेन्टलले फिल्डमा दिने शिक्षा पनि निकै राम्रो छ । यो शिक्षाले मेरो जीवन ब्यवहारमा निकै राम्रो भूमिका खेलेको अनुभव मलाई भएको छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम विश्वभर एउटै हो । तर म्यानेजमेन्टको फिल्डमा विश्वभर दैनिक के के भइरहेको छ, त्यो जान्न जरुरी हुन्छ । नेपालका कजेलहरु त्यसको सिकाइमा कमजोर छैनन् ।
उच्च शिक्षाका लागि धेरै बिद्यार्थीहरु ठुलो धनरासी खर्च गरेर देशबाहिर जान्छन् । उनीहरु पढाई खर्च जुटाउन र दैनिक जीवन चलाउन सानो भन्दा सानो काम गर्दछन् । तर त्यही शिक्षा नेपालमा लिन सकिन्छ । यहाँ आफ्नो ब्यवसाय, जागिर सँगै त्यही लेवलको शिक्षा लिन सकिन्छ ।
जुनदेशमा पुगेपनि शिक्षा लिने क्षमता बिद्यार्थीमै निहित हुन्छ
निलम केसी,सुविसु एचआर म्यानेजर
गुणस्तरीय शिक्षाको मामलामा कलेजलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । विद्यार्थी आफ्नो पनि भूमिका त्यतिकै हुनु पर्दछ । विकसित मुलुक र विकासिल मुलुकको शिक्षाको तुलना गर्न सकिदँैन ।
नेपालमा लिएको शिक्षा आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी छैन भन्ने कुरा सत्य होइन । आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने र अन्तराष्टिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएका बिद्यार्थी यहाँका कलेजहरुबाट पनि उत्पादन हुन सक्छन् ।
अमेरिकन विश्वविद्यालयबाट मान्यता पाएको प्रिसिडेन्टल कलेलबाट मैले एमविए गरेँ । मलाई अमेरिकन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजको खोजी थिया,े भिजिट गर्दै जाँदा म्यानेजम्यान्ट र वोर्ड हेर्दा चित्त बुझ्यो । म त्यही भर्ना भएकी थिएँ ।
प्रिसिडेन्टल कलेजमा शिक्षा अन्य कलेजको भन्दा व्यवहारिक,गुणस्तरीय छ । यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरुसँग यति धेरै ज्ञानको भण्डार छ त्यो ज्ञान लिन सक्ने हो भने अथाह छ ।
कठिन मोडमा पनि नेपालको शिक्षाले मलाई आत्म विश्वासी र संघर्षसिल बनायो
केकी अधिकारी ,अभिनेत्री
जीवनका जस्ता सुकै कठिन भन्दा कठिन मोडहरुमा पनि संर्घष गर्न र कोसिस गर्न कहिलै नछोडने, आत्मबल र आत्मविश्वाश बनाउन सक्ने नै सार्थक शिक्षा हो । नेपालका कलेजहरुमा यो शिक्षा दिन सक्ने क्षमता म देख्दछु । म भर्खर दिक्षित भएको प्रिसिडेन्टल कलेजबाट मैले त्यही कुरा सिकेँ ।
अनुभवी, दक्ष प्रोफेसर,फरक प्रकारको शिक्षण विधी, स्वदेशमा वुबा आमाकै काखमा बसेर, अमेरिकन पद्धति र पाठयक्रमको अध्यापन, र स्वदेशमै बसेर अमेरिकी विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट पाइने भएपछि मैले प्रिसिडेन्ट कलेज रोजे ।
शिक्षण विधी, प्रोफेसरहरुमा भएको ज्ञानको अथाह भण्डार र वितरण तरिका अपनाउन सके हरेक बिद्यार्थी आत्मनिर्भर हनु सक्छन् र बेरोजगार पनि हुँदैनन् । शिक्षा भनेको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र सोकेसमा सजाएर राख्नलाई होइन । प्रमाणपत्र देखाएर ज्ञानको सिप विकाएर जीवन जिउन सिक्नु पर्दछ ।
सर्टिफिकेट लिनु मात्र शिक्षा होइन ।
बिनोद श्रेष्ठ, हेड अफ सपोर्ट सर्भिस, टियर फन्ड
सवैलाई उच्च शिक्षा विदेशमा गएर पढ्न सम्भव छैन । मलाई पनि सम्भव थिएन । विदेशी शिक्षा नेपालमा लिने चाहना थियो । त्त्यही कारण प्रिसिडेन्टल कलेज रोज्न पुगेँ ।
मेरो उदेश्य सर्टिफिकेट लिने मात्र थिएन । सरकारी स्कूलबाट सकिएपछि पुल्चोकबाट सिभिल इन्जिनियर गरे । स्कोलरसिप हुँदाहुँदै छोडिदिए । पिपल्स हुदै पव्लिक युथ कलेजमा भर्ना हुँन पुगे । कलेज गईन, सेल्प स्टडी गरे ।
म प्रिसिडेन्टल कलेजमा अध्यापन गराउने प्रोफेसरहरु निकै दक्ष र अनुभवी भएको मैले पाएँ । उहाँहरुसँग अपार क्षमता र विश्व परिवेश अनुसारको शिक्षा दिन सक्ने क्षमता छ ।
हर्वाड विश्वविद्यालयबाट पनि नपाइने ज्ञान भएका प्रोफेसरहरु प्रिसिडेन्टल कलेजमा छन । ति प्रोफेसरहरुबाट विद्यार्थीले कति ज्ञान लिन सक्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीहरुमा पनि भर पर्ने गर्दछ ।
विदेशी कलेजभन्दा नेपाली कलेजमै भविश्य छ
अरुण झा,(रेसिडेन्टल म्यानेजर क्लव हिमालयन नगरकोट)
म शिक्षा प्राप्त गर्न विदेश पनि गएँ । भारतको बैंग्लोर युनिभर्सिटीबाट विजएम गरेँ । तर त्यहाँ भन्दा आत्मविश्वासी शिक्षा मैले नेपालमै पाएँ । बैंग्लोरबाट फर्केपछि म एभरेष्ट होटलमा काम गरिरहेको थिँए, त्यही बेला अमेरिकन सर्टिफिकेट लिन मन जाग्यो । र म प्रिसिडेन्टल कलेज भर्ना भएँ ।
तर मैले त्यहाँ फरक अनुभव गरेँ । स्टडी भन्दा प्रयाक्टिकल बढि भयो भने ब्यक्तिलाई आत्मविश्वासी बनाउँदो रहेछ । त्यही आत्मविश्वासमा नै जीवन जिउनको मजा र शिक्षाको ज्ञान देखिने हो । मैले यति भन्नुको कारण के हो भने उच्च शिक्षाका लागि विदेश होइन स्वदेश नै ठिक छ । किनकी मेरो अनुभवले त्यही भन्छ ।
उच्च शिक्षा लिन विदेश जाँदा आर्थिक ब्ययभार थपिने पात्र हो । त्यही प्रकारको ज्ञान नेपालमा पनि सजिलै पाउन सकिन्छ । विदेश होइन नेपाल रोजौ, जीवन जिउन सिकौ मेरो सवैलाई आग्रह छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सफेद झुट- नमुना एक
बाबुरामद्धारा एमाओवादी परित्याग
प्रचण्ड क्रान्तिकारी भनेको त पण्डित पो रहेछन !
भारतिय नागरिकद्धारा आठ बर्षिय बालिकाको बलात्कार
भान्टाबारी काण्डमा सरकारले सोध्यो भारतीय दुतावासलाई स्पष्टीकरण
स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा, विदेश धाउँनै नपर्ने